SAWIRO: Ahmed Madoobe ” Isbitaalka Jaalle Siyaad laba matoor ayaan ugu deeqeynaa, sidoo kalana wixii dhaqaale kale ah diyaar ayaan ula nahay” – Kismaayo24 News Agency
SAWIRO: Ahmed Madoobe ” Isbitaalka Jaalle Siyaad laba matoor ayaan ugu deeqeynaa, sidoo kalana wixii dhaqaale kale ah diyaar ayaan ula nahay”
by admin 28th August 2016 28th August 2016 0122
Madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madoobe oo magaalada Muqdisho kula kulmay xubno waday ololaha dhameystirka isbitaalka Jaalle Siyaad Barre ayaa waxaa uu sameeyey laba ballanqaad oo muhiim ah.
Drs, Deeqa Maxamed Siyaad Barre oo ah gabar uu dhalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa iyo xubno ay ka mid yihiin : Musharax Xildhibaan Abdiweli Ibrahim Garyare iyo Asiili Xaashi Dhaba- cadeeye ayaa sharaxaad fiican ka siiyey Madaxweynaha isbitaalka iyo waxa uu hadda u baahan u yahay.
“Madaxweyne, isbitaalka saddex sano ayaan wadnay howshiisa, waana la dhisay dhismo ahaan iyo qalab ahaan, waxaase ka dhiman matooradii korontada siin lahaa iyo dhaqaalaha lagu socod-siinayo ee shaqaalaha, waana laba arrin oo aan Jubbaland uga fadhino”. Ayey tiri Deeqa Maxamed Siyaad Barre.
Dhinaca kale, Asiili Xaashi oo ah guddoomiyaha hay’adda GRF ee wada dhismaha isbitaalkaasi ayaa dhankeeda sheegtay in isbitaalka u baahan yahay guddi ka yimaada shacabka ama maamulka dalka ay midkood la wareegaan, oo ay wataan.
“Isbitaalka shacabka gobolka iyo Jubbaland inay la wareegaan oo dhaqaalaha ku baxaya dhan shaqaale iyo maamulkiisa hantaan, maxaa yeelay annaga reer USA ayaan nahay, oo kama war qabi karno, waase dhisnay hadda” ayey tiri Asiili Xaashi.
Sidoo kale, musharax Xildhibaan Abdiweli Garyare oo ahaa qofka kulanka kasoo shaqeeyey inuu dhaco ayaa dhankiisa sheegay in maanta la joogo waqtiga uu maamulka Jubbaland qaadan lahaa doorkiisa horumarinta caafimaadka ee gobolkaasi Gedo.
“Deeqo Maxamed Siyaad iyo Asiili Xaashi waa dadaaleen, waxaana ay keeneyn meel fiican isbitaalkan, sidaasi darteed Jubbaland waxaa kaga doonayaa inay doorkii caafimaadka qaataan, oo ay isbitaalkan iyo socodsiin tiisa kaalin muuqata ku yeeshaan” ayuu yiri Musharax Xildhibaan Abdiweli Garyare.
Madaxweyne Ahmed Madoobe ayaa hadalka qaatay, isagoona sheegay inay ka maamul ahaan labada matoor ee isbitaalka degdeg ugu iibinayaan, islamarkaana gaarsiin doonaan Garbahaareey. Isagoona dhanka kale ballanqaaday gacan ka geysashada dhaqaalaha ku baxaya isbitaalka ee shaqaalaha.
” Isbitaalka lacagta ku baxeysa laba ayaan u qeybin doonaa, mid aan ka qaadno daqliga gobolka Gedo iyo mid uu bixiyo maamulka Jubbaland, labada matoorna waan idiin dalbeynaa ” ayuu yiri Madaxweyne Ahmed Madoobe.
Waxaase uu ka dalbaday xubnaha isbitaalka wada inaysan isbitaalka Jubbaland ku wareejin maamulkiisa oo ay iyaga hayaan, wixii dhaqaale ahna Jubbaland weydiiyaan.
Ballanqaadka Madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madoobe u sameeyey isbitaalka Jaalle Siyaad Barre ayaa noqonaya midkii ugu horeeyey ee laga helay dhanka maamulka Jubbbaland, haddii la fuliyana waa mid wax badan u tari doona dadka deegaanka.
DEG DEG: Daawo Sawirro Gaari Qarax laga soo Buuxiyay oo Goordhaw lagu….
Daawo Shariif Xasan oo Xariga ka jaray Villa Baraawe…
Daawo: Waxgaradka beesha hawiye oo kulan deg deg ah uu kaga socdo hotelka city place maxaa diirada lagu saaraya?
DEG DE: k24 oo Heshay Liiska Gollaha Wasiirada ee Goordhaw uu ku dhawaaqay Madaxweynaha Jubbaland Axmad Madoobe+Sawirro
Tifaftiraha K24 18th May 2016 18th May 2016
Sawirro: Ra’iisul Wasaare Xasan Khayre oo maanta dhagax dhigay Xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo